वेबसाइटमा प्रत्यक्ष ट्विटर फिड कसरी इम्बेड गर्ने? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 26, 2021 फेब्रुअरी 25, 2021 डेजी स्मिथ अरबी फ्रीलान्स, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि
वेबसाइटमा इम्बेड गरिएको प्रत्यक्ष ट्विटर फिडले तपाइँको दर्शकलाई ट्विटरको रूपमा उस्तै सामाजिक अनुभव प्रदान गर्दछ र तपाइँको वेबसाइटको विश्वसनीयतालाई तपाइँको आगन्तुकहरूको आँखामा बढाउँदछ।
टागेम्बेड ब्रान्ड र मार्केटरहरूको बीचमा लोकप्रिय टूल हो जुन तिनीहरूको वेबसाइटमा ट्विटर फिडहरू इम्बेड गर्न समय र लागत-प्रभावी तरीकामा छ।
तपाईंको वेबसाइटमा ट्विटर फिड इम्बेड गर्न अर्को तरिका ट्विटर विजेट हो।
हामी तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा ट्वीटर फिडहरू सिर्जना गर्न र प्रत्यक्ष इनलाइनहरूको लागि शक्तिशाली उपकरणहरूको बारेमा बताउँछौं। तर किन तपाइँको वेबसाइटमा ट्विटर फिडहरू वा भित्तेहरू एकीकृत गर्नुहुन्छ? त्यसो भए सुरू गरौं!
टेगेम्बेडको साथ, तपाईं यो ट्विटर फिड अधिक आकर्षक र ध्यान खिच्न सक्नुहुन्छ विषयवस्तुहरू, लेआउट शैलीहरू, पृष्ठभूमि र colorsहरू, फन्टहरू, आदि अनुकूलित गरेर।
वेबसाइटमा इम्बेड गरिएको ट्विटर फिड किन
ट्विटर एक लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो जसले तपाईंलाई समाचार, छविहरू, भिडियोहरू, मनोरन्जन, शैक्षिक, र जानकारीपूर्ण सामग्री समावेश गर्ने पर्याप्त सामग्र सामग्री प्रदान गर्दछ तपाईंको वेबसाइटको उपस्थिति बढाउन र तपाईंको वेबसाइटमा अनौंठो सामग्री थप्नको लागि। तपाईंको व्यवसायको आकारले फरक पार्दैन, ट्विटर सबैको लागि चमत्कारी मंच हो र तपाईंको दर्शकहरूसँग ब्रान्ड प्रतिष्ठा र सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्दछ।
ट्विटरले न केवल तपाइँको ब्रान्डको सामाजिक उपस्थिति बनाउँदछ तर सम्भावित लीडहरू आकर्षित गरेर, जानकारीमूलक सामग्री प्रमोट गरेर, र फलोअरहरूको लागि निःशुल्क समाधान प्रदान गरेर नाफा सिर्जना गर्दछ। एक वेबसाइटमा प्रत्यक्ष ट्विटर फिड्स इम्बेडिंगले तपाइँको दर्शकलाई ट्विटरको रूपमा उस्तै सामाजिक अनुभव प्रदान गर्दछ र तपाइँको आगन्तुकहरूको आँखामा तपाइँको वेबसाइटको विश्वसनीयता बढाउँदछ।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा समीक्षा, ट्वीट, छवि, वा भिडियो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको दर्शकहरु लाई संलग्न गर्न। तर कसरी तपाईं यो सामग्री एकत्रित गर्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ? यहाँ ट्विटर उपकरणहरूको भूमिका आउँदछ जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा ट्विटर फिडहरू संकलन गर्न र इम्बेड गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँसम्म, सहि ट्विटर उपकरण खोज्न यो एक भारी काम हो जुन तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा ट्विटर विजेट इम्बेड गर्न आवश्यक सबै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको खोज प्रक्रिया सहज बनाउन, हामी तपाइँलाई सात राम्रो ट्विटर उपकरण तपाइँको वेबसाइट मा प्रत्यक्ष ट्विटर फिडहरू इम्बेड गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
त्यसैले चल्न सुरु गरौं!
वेबसाइटमा ट्विटर फिड इम्बेड गर्न उत्तम उपकरणहरू:
टागेम्बेड ब्रान्ड र मार्केटरहरूको बीचमा लोकप्रिय टूल हो जुन तिनीहरूको वेबसाइटमा ट्विटर फिडहरू इम्बेड गर्न समय र लागत-प्रभावी तरीकामा छ। योसँग एक सरलीकृत ईन्टरफेस छ जुन कुनै प्राविधिक विशेषज्ञता बिना नै प्रयोग गर्नको लागि सुपर हो। तपाईं आफ्नो ट्वीटर फिडहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ ह्यासट्यागहरू, उल्लेखहरू, ह्यान्डलहरू प्रयोग गरेर, र तपाईंको मनपर्ने ट्वीटहरूको सूचीबाट।
टेगेम्बेडको साथ, तपाईं यो ट्विटर फिड अधिक आकर्षक र ध्यान खिच्न सक्नुहुन्छ विषयवस्तुहरू, लेआउट शैलीहरू, पृष्ठभूमि र colorsहरू, फन्टहरू, इत्यादि अनुकूलित गरेर। तपाईंसँग तपाईंको ट्विटर फिडहरूमा पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ र कसरी तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ।
मध्यम सुविधाहरूको साथ, तपाईं तपाईंको क्युरेट गरिएको ट्विटर फिडबाट अप्रासंगिक छविहरू वा सामग्री हटाउन सक्नुहुनेछ ताकि तपाईंको वेबसाइटमा केवल गुणस्तरीय सामग्री प्रदर्शन हुन्छ। टेगेम्बेडका अन्य आश्चर्यजनक सुविधाहरू हुन् अनुकूलन सीएसएस, कस्टम पोष्टहरू, अपवित्र फिल्टर, एपीआई पहुँच, र अविरल फिड अन्तरालहरूको स्वचालित वास्तविक समय अपडेट। यसले तपाईंको क्रेडिट कार्ड विवरण बिना १ 14-दिन नि: शुल्क परीक्षणको साथ बजेट-मैत्री मूल्य निर्धारण योजनाहरू प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंको वेबसाइटमा ट्विटर फिड इम्बेड गर्न अर्को तरिका ट्विटर विजेट हो। हो, ट्विटरले तपाइँको वेबसाइटमा ट्विटर फिडहरू संकलन गर्न र इम्बेड गर्न यसको उपकरण प्रदान गर्दछ। यस उपकरणको साथ, तपाईं आफ्नो ट्विटर खाता टाइमलाइनबाट ट्विटर पोस्ट र तपाईंको वेबसाइटमा सार्वजनिक खाताहरूबाट ट्विटर पोष्टहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं पोष्टहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ र पोष्टको इम्बेड कोड प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ। अर्को चरण भनेको तपाइँको वेबसाइटमा लग ईन गर्नुहोस् र इम्बेड कोड टाँस्न वेबसाइट ब्याकइन्डमा जानुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि कोडको प्लेसमेन्ट तपाईंको वेबसाइटको सहि ठाउँमा छ। अन्यथा, यसले वेबसाइटको रूपरेखा परिवर्तन गर्न वा वेबसाइट सामग्रीमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ जुन तपाईंको वेबसाइटमा पहिले नै उपलब्ध छ।
यो नि: शुल्क हो र प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर यो उपकरणको एक मात्र मुख्य कमजोरी भनेको यो हो कि तपाईंले मैन्युअल तरिकाले सबै गर्नुपर्दछ, र तपाईं आफ्नो ट्विटर फिडहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्न र यसलाई ट्विटरमा हेर्ने तरिकाले तपाईंको वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न।
एल्फसाइट फेरी ट्विटर फिडहरू इम्बेड गर्न र वेबसाइटहरूमा प्रयोगकर्ता संलग्नता बढाउन एक धेरै लोकप्रिय उपकरण हो। तपाईं ट्विटर फिडहरू एल्फसाइटको साथ आफ्नो ट्विटर खाता जडान गरेर संकलन गर्न सक्नुहुनेछ र फेडहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। यसले तपाइँलाई वेबसाइटमा ट्विटर फिडलाई इम्बेड गर्न अनुमति दिन्छ सामग्रीको पign्क्तिबद्धतालाई बाधा नपुर्‍याई सबै स्क्रिन आकारहरूमा फिट गर्नको लागि प्रतिक्रियावादी।
अनुकूलन विकल्पको साथ, तपाईं ट्वीटर फिडहरू दर्शकहरूको ध्यान खिच्न र तपाईंको वेबसाइटमा उनीहरूको निवास समय बढाउन आकर्षक सामग्रीमा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले सस्तो मूल्य निर्धारण पनि प्रस्ताव गर्दछन्, तर केवल एक त्रुटि यही हो कि तपाई टागेम्बेड जस्तो धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन।
अनस्टाइपले ब्रान्डहरूलाई ट्विटरबाट छविहरू, भिडियोहरू, इत्यादि स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ र एकल क्लिकको साथ सीधा वेबसाइटहरूमा इम्बेड गर्दछ।
अनस्टाइपले ब्रान्डहरूलाई ट्विटरबाट छविहरू, भिडियोहरू, इत्यादि स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ र एकल क्लिकको साथ सीधा वेबसाइटहरूमा इम्बेड गर्दछ। यो एक सामाजिक मिडिया एग्रीगेटर हो जसले तपाइँको वेबसाइट डिजाइनको साथ फिट हुन विषयवस्तु र लेआउट डिजाइनहरू प्रयोग गरेर राम्ररी ट्विटर भित्ताहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै वेबसाइटहरूले ओन्स्टाइप वेबसाइटहरूमा लाइभ ट्विटर भित्ताहरू इम्बेड गर्न प्रयोग गर्दछन् किनकि यो उत्तरदायी र हल्का तौल हो, जुन तपाईंको वेबसाइटमा द्रुत र द्रुत रूपमा लोड हुन्छ। तपाईको विभिन्न सुविधाहरू पाउनुहुनेछ जस्तै म्यानुअल मोडरेसन, स्वचालित मोडरेसन, अपवित्र फिल्टर, कस्टम सीएसएस, र सीटीए बटन तपाईंको ट्विटर फिडको लुक र भावना बढाउन।
अनस्टाइपले लचिलो मूल्य निर्धारण योजनाहरू प्रदान गर्दछ तर सबै समान सुविधाहरूको साथ टेग्याम्बेड भन्दा उच्च पक्षमा। तपाईं यस उपकरणको अन्वेषण उनीहरूको १--दिन नि: शुल्क परीक्षणमा लैजान सुरू गर्न सक्नुहुन्छ र जाँच गर्नुहोस् कि कसरी उनीहरू तपाईंको वेबसाइट प्रत्यक्ष गर्दै छन्। ट्विटरले आवश्यकता फिड गर्दछ।
यी केहि सबैभन्दा लोकप्रिय प्रत्यक्ष ट्वीटर फिडहरू एम्बेडिंग उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध छन्। तपाइँ यी कुनै पनि उपकरणहरू तपाइँको वेबसाइटमा ट्विटर पोष्टहरू प्रदर्शन गर्न र तपाइँको वेबसाइटमा थप सुन्दर सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अद्वितीय र आकर्षक सामग्री प्रत्येक वेबसाइट मालिकको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो, एक वेबसाइट मा ट्विटर फीड सम्मिलित भन्दा राम्रो केहि छैन।
यस ट्विटरले आकर्षक, आकर्षक र फीड गर्ने दर्शकहरूको ध्यान चोर्न र तपाईंको वेबसाइटमा प्रयोगकर्ता अनुभव बृद्धि गर्न पर्याप्त फिड गर्दछ। त्यसो भएमा ढिलाइ नगरी, तपाइँ कुनै पनि ट्विटर फिड इम्बेडि tools उपकरणहरू तपाइँको वेबसाइटको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सांप्रदायिक समाचार लाइभ ट्विटर फिड इम्बेड गर्नुहोस् इम्बेड ट्विटर फिड ट्विटर विजेट
म डेजी हुँ र म एक डिजिटल मार्केटर र प्राविधिक लेखक हुँ। म अन्वेषण, टेक्नोलोजी, सामाजिक मिडिया, र डिजिटल मार्केटिंग को प्रवृति को बारे मा र लेख लेख्न को लागी भावुक छु।